ကိုဗစ် ၁၉ ဒုတိယလှိုင်း
20 သြဂုတ်၊ 2020
ကိုဗစ် ၁၉ အတွက် ကာကွယ်ကုသဆေး ကောင်းကောင်း မရသေးချိန်မှာ Second wave လို့ ခေါ်တဲ့ ဒုတိယလှိုင်းအဖြစ်နဲ့ နောက်တချီ ရောဂါပိုးပျံ့ ပွါးလာမှာကို စိုးရိမ်နေကြတာပါ။ ဒုတိယလှိုင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အဏုဇီဝဗေဒပညာရှင် မခင်ဇာဝင်းပြည့်က ပြောပြပေးမှာပါ။
ကိုဗစ် ၁၉ အတွက် ကာကွယ်ကုသဆေး ကောင်းကောင်း မရသေးချိန်မှာ Second wave လို့ ခေါ်တဲ့ ဒုတိယလှိုင်းအဖြစ်နဲ့ နောက်တချီ ရောဂါပိုးပျံ့ ပွါးလာမှာကို စိုးရိမ်နေကြတာပါ။ဒုတိယလှိုင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အဏုဇီဝဗေဒပညာရှင် မခင်ဇာဝင်းပြည့်က ပြောပြပေးမှာပါ။
မခင်ဇာဝင်းပြည့်။။“ဒုတိယလှိုင်းဆိုတာကတော့ ၁၉၁၈ တုန်းက ဖြစ်ခဲ့တဲ့ Influenza Pandemic ကို အခြေခံပြီးတော့ ပြောတာပေါ့နော်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ၁၉၁၈ တုန်းက စဖြစ်တော့ Spring ပေါ့နော် နွေဦးရာသီမှာ စဖြစ်တယ်၊ ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါကျရင် သူက infection rate တွေ သေနှုန်းတွေက ကျသွားတယ်။ ရေပြင်ညီမျဉ်းအတိုင်း ကျသွားပြီးတဲ့အခါကျမှ သူက ၁၉၁၈ ဆောင်းဦးရာသီမှာ တခါ ပြန်တက်တယ်။ တက်သွားပြီးတော့ နောက်တခါ ပြန်ကျသွားတယ်။ infection rate နဲ့ death rate က ကျသွားပြီးတော့ ၁၉၁၉ မှာ တခါပြန်ပြီးတော့ တက်သွားတာပေါ့နော်။ အဲဒီဟာက ဒီလို နှစ်နဲ့ ချီပြီးတော့ ကြာသွားတဲ့အခါကျတော့ ပထမ ဒီလို တလှိုင်းတက်တယ်၊ ပြီးတော့ ပြန်ကျတယ်။ ဒုတိယလှိုင်းတက်တယ် ၊ ပြန်ကျတယ်။ တတိယ တလှိုင်းတက်တယ် ၊ ပြန်ကျတယ် အဲဒါကို သူက Second wave ဆိုပြီးတော့ဒါက reference အနေနဲ့ပြောတာပေါ့နော်။”
ကိုဗစ် ၁၉ ဟာ အခုလို ဒုတိယလှိုင်းအဖြစ် ပျံ့ ပွါးခဲ့တဲ့ စပိန်တုပ်ကွေးဖြစ်ပွါးတာနဲ့ ပုံစံတူမတူတော့ မသိရသေးပါဘူး။ သိပ္ပံပညာရှင်တွေ လေ့လာနေကြဆဲ ဖြစ်ပြီး သူ့အကြောင်း ကောင်းကောင်း မသိကြသေးပါဘူး။
မခင်ဇာဝင်းပြည့်။။“ဗီယက်နမ်လိုတိုင်းပြည်မျိုး ၊ တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံလို တိုင်းပြည်မျိုး ၊ ဒါမှမဟုတ်ရင် New Zealand လိုတိုင်းပြည်မျိုး သူတို့တွေဆီမှာ zero အထိဖြစ်သွားပြီးတော့ တခါပြန်တက်လာတယ်။ ဒါမျိုးဆိုရင် Second wave ဆိုပြီးတော့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ဥပမာ အမေရိကန်လိုတိုင်းပြည်မျိုး၊ UK လိုတိုင်းပြည်မျိုးဆိုရင် တက်နေတာကနေ ပြန်ကျသွားတဲ့ base က ရေပြင်ညီမျဉ်းနဲ့ မညီသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် ဒါက ပထမလှိုင်းမှာပဲ ရှိသေးတာလား နောက်တလှိုင်းဘယ်လိုလာမလဲ၊ အဲလိုမျိုးဟာတွေ မသိသေးဘူးပေါ့နော်။ ဆိုတော့ သေသေချာချာ ဒါတခုလုံးကို ပုံသေဆွဲလို့ မရသေးဘူးပေါ့နော်။”
ဗိုင်းရပ်ပိုး ကူးစက်မှု တန့်သွားတာ ပိုများလာတာလို အတက်အကျ ဖြစ်နေတာဟာ ဘာပေါ်မှာ မူတည်နေပါသလဲ။
မခင်ဇာဝင်းပြည့်။။“သူက လူတွေရဲ့ ပြုမှုပုံမှာလည်း မူတည်သလိုမျိုး Virus ရဲ့ မျိုးဗီဇပြောင်းလဲမှုပေါ်မှာလည်း မူတည်တယ်။ အခုသိထားတဲ့အရ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံမှာ စစချင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ ဥရောပမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ သူက Mutation တွေရှိတယ်။ အဲဒါကြောင့် အီတလီတို့ စပိန်တို့မှာ ဒါကြောင့်မို့ ကူးစက်နှုန်းသေနှုန်းတွေ အရမ်းများခဲ့တယ်။ အခုဆိုရင် ဘရာဇီးမှာ ဖြစ်ခဲ့တာဆိုရင် Mutation ရှိသလား မျိုးဗီဇဘယ်လိုမျိုး ပြောင်းသွားသလဲဆိုတာကို လေ့လာနေတုန်းပဲပေါ့နော်။ အခုဒါတွေက ဘယ်လိုထပ်ပြီးတော့ ပြောင်းသွားသလား၊ မပြောင်းလဲသေးဘူးလားဆိုတာ ထုတ်ပြန်ချက်မရှိသေးဘူး။ ဆိုတော့ မျိုးဗီဇပြောင်းလဲမှုပေါ်မှာလည်း မူတည်ပါတယ်ရှင့်။”
ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှု ကာကွယ်ရေးအတွက် တဦးနဲ့ တဦးခပ်ခွါခွါနေဖို့ နှာခေါင်းစည်းတပ်ဖို့ နဲ့ တကိုယ်ရေသန့်ရှင်းဖို့လို ပြုမှုနေထိုင်ရေးဟာ အရေးကြီးကြောင်း ကျန်းမာရေးတာဝန်ခံတွေက သတိပေးချက်တွေ ထုတ်ပြန်နေတာပါ။
ကူးစက်နှုန်း သေနှုန်း သိသိသာသာ များစေတဲ့ Mutation ခေါ် မျိုးဗီဇပြောင်းလဲမှု ဆိုတာဘာပါလဲ။
မခင်ဇာဝင်းပြည့်။. ။“မျိုးဗီဇပြောင်းလဲတယ် ဆိုတာက မျိုးဗီဇရဲ့ sequence အစီအစဉ်ထဲက code လုပ်တာ ပေါ့နော်။ ဒီမျိုးဗီဇ အစီစဉ်ထဲမှာ သူက ABCD ဓါတ်သတ္တုပစ္စည်း လေးတွေကို code လုပ်တဲ့ အခါမှာ သူက တခုလေး ပြောင်းသွားတာနဲ့။ code လုပ်တယ် ဆိုတာက A B C D အတွဲတခုသည် - ဒီ ၃ ခုတွဲအတွဲတခုသည် အမိုင်နိုအက်ဆစ် တခု ကို သူက ကိုယ်စားပြုတယ်။ အဲဒီလို ကိုယ်စားပြုတဲ့ အခါမှာ A B C D အတွဲတခုက အစီအစဉ် ပြောင်းသွားတယ် ဆိုတာနဲ့ သူ့မှာ ထွက်တဲ့ ပရိုတိန်းရဲ့ ပုံစံကလည်း ပြောင်းသွားတယ်။ ဒါကို အဓိက အားဖြင့်တော့ မျိုးဗီဇ ပြောင်းလဲမှု mutation ဆိုပြီးတော့ ခေါ်တာ ပေါ့နော်။
ပရိုတိန်းက သူက ပုလဲ ဆွဲကြိုးအနေနဲ့ ကြည့်မယ်ဆိုရင် ပုလဲကလေးတွေ အကုန်လုံး စီထားတဲ့. ပုလဲဆွဲကြိုးသည် ပရိုတိန်း ဆိုရင် ပုလဲ တခုသည် အမိုင်နိုအက်ဆစ် တလုံး။ အမိုင်နိုအက်ဆစ် တလုံး တလုံး စီမှာ အဖြူကလေးတွေပဲ လာပြီး အဲဒီ တလုံးမှာ မဲသွားတယ် ဆိုရင် ဒီဟာသည် mutation ဖြစ်တာ။ mutation ဖြစ်နေတဲ့ ဟာသည် သူ့ရဲ့ ဒီ ပုလဲ ဆွဲကြိုးက အလုံးက ပုံစံ မတူတော့ဘူး ဖြစ်သွားတယ်။ ပုံစံမတူတော့ပဲ ဖြစ်သွားတဲ့ အချိန်က ပုလဲ ဆွဲကြိုးကို ခွေလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ - ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ပရိုတိန်းတွေ အကုန်လုံးက ကိုယ်ထဲမှာ နေတယ် ဆိုလို့ရှိရင် အတန်းလိုက်ကြီး နေတာ မဟုတ်ဖူး။ 3D - သုံးဖက်မြင် ရုပ်လုံးကြွ ပုံစံမျိုး ပေါ့နော်။ သူတို့ ရဲ့ ပုံစံလေးတွေရှိတယ်။ အဲဒီ. ပုံစံက ပြောင်းသွားတယ်။ ပြောင်းသွားတဲ့ အခါ ကျရင် သူတို့ရဲ့ receptor ကို bind လုပ်မယ့် - receptor ဆိုတာက ကိုယ်ထဲမှာ ၊ လက်ခံကောင်ရဲ့ ဒီ receptor ကို ကုပ်နိုင်အားသည် ဘယ်လောက် attraction ရှိသလဲ ဘယ်လောက် ကုပ်ထားနိုင်သလဲ၊ ဘယ်လောက် မြဲ သလဲ ဆိုတဲ့ အဆ ကွာသွားတယ်။ အဲဒီ အတွက်ကြောင့် - mutation ကြောင့် ပျံျ့နှံ့အား ပိုကောင်းလာနိုင်ပြီး ကူးစက်မှုသိသိသာသာ များသွားတာပါ။”
မျိုးဗီဇပြောင်းလဲတဲ့ ပုံစံကို လေ့လာပြီး ကာကွယ်ဆေးတွေ ကုသဆေးတွေ ထုတ်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေတာပါ။
မခင်ဇာဝင်းပြည့်။. ။“အခုချိန်အထိကတော့ စပြီးတော့ တွေ့တဲ့ ကိုဗစ် ၁၉ ဗိုင်းရပ်စ် ပိုးသည် သူနဲ့ မျိုးဗီဇ တူတဲ့ ၉ ၆.၄ % တူတယ် ဆိုတဲ့ဟာက ဒီ မြင်းခွါပုံသဏ္ဍာန် ရှိတဲ့ ဒီ horse shoe ဆိုတာ။ ဒီ မြင်းခွါပုံသဏ္ဍာန် ရှိတဲ့ လင်းနို့ ပေါ့နော်။ အဲဒီမှာ တွေ့ရတဲ့ ဟာသည် ၉ ၆.၄% မျိုးဗီဇ တူတယ်။ ကျန်တဲ့ အဲဒီ ၃.၆% လောက်ကလေးကပဲ နဲနဲ ကွဲသွားတယ်။ ကွဲသွားတဲ့ဟာမှာ အဓိက တွေ့ရတဲ့ ဟာက ဒီ ပေါင်းတဲ့ spike ပရိုတိန်း- ကြက်မောက်သီးပုံ သူ့ရဲ့ ထိပ်က အမွှေးလေးတွေမှာ ရှိတဲ့ဟာပေါ့။ ဗိုင်းရပ်စ်ကို ကြက်မောက်သီးပုံ လို တွက်မယ် ဆိုရင် သူ့ရဲ့ ထိပ်က အမွှေးလေးတွေက ဒီ receptor ကို လာပြီး ထိမယ်။ ဒီလိုထိတဲ့အခါ ပြန်ခွါလို့ မရတဲ့ ပေါင်းစပ်ခြင်းနဲ့ ပေါင်းပြီးတော့ ဘယ်လို ဝင်တယ် ဆိုတာ။ အဲဒီဟာမှာ အဓိက ကွဲသွားတာ ပေါ့နော်။
စ စ ချင်းတုန်းကတော့ ဒီကြားခံကောင်က သင်းခွေချပ်လို ပုံစံမျိုး သတ္တဝါမျိုးကနေ ကူးတယ်၊ ဆိုပြီးတော့ သိရတယ်။ ရှေ့ဆက်ပြီး တော့ နောက်ထပ်ပြီးတော့ သက်သေ အထောက်အထား ထပ်မတွေ့ရတဲ့ အတွက် ကြားခံက ဘာကောင်လဲ ဆိုတာကို တော့ အခုထိ ရှာနေတုန်းပဲပေါ့။ တိတိကျကျ တော့ မသိရသေးဘူးပေါ့။
စစချင်းးတွေ့တဲ့ ထဲက မျိုးဗီဇ sequence အရ ဘယ်လောက် တူတယ် ဆိုပြီးတွက်တယ်။ မျိုးဗီဇက ဒီကနေ တဆင့် ပြောင်းသွားတယ်။ ဒီဥရောပက တွေ့တဲ့ လူနာတွေဆီက ရတဲ့ မျိုးဗီဇနဲ့ တရုတ်ပြည်မက ရတဲ့ မျိုးဗီဇ တခါ ပြန်ယှဉ်ပြီးတော့ ကြည့်တဲ့ အခါ ကျတော့ ဒီ spike ပရိုတိန်း က ပြောင်းလဲမှု ကလေးတွေ ရှိတယ်။ တခုပဲ။ အဲဒီ ပြောင်းလဲမှု တခုက သူ့ရဲ့ (ပူးပေါင်းနိုင်) ပျံ့နိုင်စွမ်း အားကို သူက ပိုပြီးတော့ တိုးပွါးစေတယ် ဆိုပြီးတော့ သူတို့က ခန့်မှန်းတယ်ပေါ့။
ဒါကြောင့်မို့ ဥရောပမှာ ပျံ့သွားတဲ့ နှုန်းက တရုတ်ပြည်မှာ ပျံ့တဲ့ နှုန်းထက် ပိုပြီးတော့ အဆမတန် များသွားတယ်ပေါ့။ ဒါကြောင့် ဒီ ထပ်ပြီးတော့ ပြောင်းလဲအုံးမလား ဆိုတဲ့ဟာကိုတော့ လေ့လာနေတုန်းပဲ။ သိပ္ပံပညာရှင်တွေ လည်းပဲ ယူနေရင်းနဲ့ပဲ လေ့လာနေတုန်းပဲ ပေ့ါနော်။ တချိန်ထဲမှာ လည်းပဲ သူတို့က တွေ့တဲ့ spike ပရိုတိန်း ကို ပစ်မှတ်ထား target လုပ် တာသည်အထိရောက်ဆုံး ဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် မို့လို့ တော်တော်များများ ကာကွယ်ဆေးတွေ ကလည်း ဒါကိုပဲ ဦးတည်ပြီး လုပ်နေကြတယ်ပေါ့။”
မခင်ဇာဝင်းပြည့်ရဲ့ ပြောကြားချက်နဲ့ပဲ ဒီသီတင်းပတ်အတွက် သိပ္ပံနဲ့နည်းပညာ ကဏ္ဍကို ဒီမှာပဲ ရပ်နားလိုက်ပါရစေ။
ကိုဗဈ ၁၉ အတှကျ ကာကှယျကုသဆေး ကောငျးကောငျး မရသေးခြိနျမှာ Second wave လို့ ချေါတဲ့ ဒုတိယလှိုငျးအဖွဈနဲ့ နောကျတခြီ ရောဂါပိုးပြံ့ ပှါးလာမှာကို စိုးရိမျနကွေတာပါ။ဒုတိယလှိုငျးနဲ့ ပတျသကျပွီး အဏုဇီဝဗဒေပညာရှငျ မခငျဇာဝငျးပွညျ့က ပွောပွပေးမှာပါ။
မခငျဇာဝငျးပွညျ့။။“ဒုတိယလှိုငျးဆိုတာကတော့ ၁၉၁၈ တုနျးက ဖွဈခဲ့တဲ့ Influenza Pandemic ကို အခွခေံပွီးတော့ ပွောတာပေါ့နျော။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ၁၉၁၈ တုနျးက စဖွဈတော့ Spring ပေါ့နျော နှဦေးရာသီမှာ စဖွဈတယျ၊ ဖွဈပွီးတဲ့အခါကရြငျ သူက infection rate တှေ သနှေုနျးတှကေ ကသြှားတယျ။ ရပွေငျညီမဉျြးအတိုငျး ကသြှားပွီးတဲ့အခါကမြှ သူက ၁၉၁၈ ဆောငျးဦးရာသီမှာ တခါ ပွနျတကျတယျ။ တကျသှားပွီးတော့ နောကျတခါ ပွနျကသြှားတယျ။ infection rate နဲ့ death rate က ကသြှားပွီးတော့ ၁၉၁၉ မှာ တခါပွနျပွီးတော့ တကျသှားတာပေါ့နျော။ အဲဒီဟာက ဒီလို နှဈနဲ့ ခြီပွီးတော့ ကွာသှားတဲ့အခါကတြော့ ပထမ ဒီလို တလှိုငျးတကျတယျ၊ ပွီးတော့ ပွနျကတြယျ။ ဒုတိယလှိုငျးတကျတယျ ၊ ပွနျကတြယျ။ တတိယ တလှိုငျးတကျတယျ ၊ ပွနျကတြယျ အဲဒါကို သူက Second wave ဆိုပွီးတော့ဒါက reference အနနေဲ့ပွောတာပေါ့နျော။”
ကိုဗဈ ၁၉ ဟာ အခုလို ဒုတိယလှိုငျးအဖွဈ ပြံ့ ပှါးခဲ့တဲ့ စပိနျတုပျကှေးဖွဈပှါးတာနဲ့ ပုံစံတူမတူတော့ မသိရသေးပါဘူး။ သိပ်ပံပညာရှငျတှေ လလေ့ာနကွေဆဲ ဖွဈပွီး သူ့အကွောငျး ကောငျးကောငျး မသိကွသေးပါဘူး။
မခငျဇာဝငျးပွညျ့။။“ဗီယကျနမျလိုတိုငျးပွညျမြိုး ၊ တရုတျပွညျသူ့ သမ်မတနိုငျငံလို တိုငျးပွညျမြိုး ၊ ဒါမှမဟုတျရငျ New Zealand လိုတိုငျးပွညျမြိုး သူတို့တှဆေီမှာ zero အထိဖွဈသှားပွီးတော့ တခါပွနျတကျလာတယျ။ ဒါမြိုးဆိုရငျ Second wave ဆိုပွီးတော့ ပွောလို့ရပါတယျ။ ဥပမာ အမရေိကနျလိုတိုငျးပွညျမြိုး၊ UK လိုတိုငျးပွညျမြိုးဆိုရငျ တကျနတောကနေ ပွနျကသြှားတဲ့ base က ရပွေငျညီမဉျြးနဲ့ မညီသေးတာဖွဈတဲ့အတှကျ ဒါက ပထမလှိုငျးမှာပဲ ရှိသေးတာလား နောကျတလှိုငျးဘယျလိုလာမလဲ၊ အဲလိုမြိုးဟာတှေ မသိသေးဘူးပေါ့နျော။ ဆိုတော့ သသေခြောခြာ ဒါတခုလုံးကို ပုံသဆှေဲလို့ မရသေးဘူးပေါ့နျော။”
ဗိုငျးရပျပိုး ကူးစကျမှု တနျ့သှားတာ ပိုမြားလာတာလို အတကျအကြ ဖွဈနတောဟာ ဘာပျေါမှာ မူတညျနပေါသလဲ။
မခငျဇာဝငျးပွညျ့။။“သူက လူတှရေဲ့ ပွုမှုပုံမှာလညျး မူတညျသလိုမြိုး Virus ရဲ့ မြိုးဗီဇပွောငျးလဲမှုပျေါမှာလညျး မူတညျတယျ။ အခုသိထားတဲ့အရ တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံမှာ စစခငျြးဖွဈခဲ့တဲ့ ဗိုငျးရပျဈနဲ့ ဥရောပမှာ ဖွဈခဲ့တဲ့ ဗိုငျးရပျဈနဲ့ သူက Mutation တှရှေိတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ အီတလီတို့ စပိနျတို့မှာ ဒါကွောငျ့မို့ ကူးစကျနှုနျးသနှေုနျးတှေ အရမျးမြားခဲ့တယျ။ အခုဆိုရငျ ဘရာဇီးမှာ ဖွဈခဲ့တာဆိုရငျ Mutation ရှိသလား မြိုးဗီဇဘယျလိုမြိုး ပွောငျးသှားသလဲဆိုတာကို လလေ့ာနတေုနျးပဲပေါ့နျော။ အခုဒါတှကေ ဘယျလိုထပျပွီးတော့ ပွောငျးသှားသလား၊ မပွောငျးလဲသေးဘူးလားဆိုတာ ထုတျပွနျခကျြမရှိသေးဘူး။ ဆိုတော့ မြိုးဗီဇပွောငျးလဲမှုပျေါမှာလညျး မူတညျပါတယျရှငျ့။”
ကူးစကျပြံ့နှံ့မှု ကာကှယျရေးအတှကျ တဦးနဲ့ တဦးခပျခှါခှါနဖေို့ နှာခေါငျးစညျးတပျဖို့ နဲ့ တကိုယျရသေနျ့ရှငျးဖို့လို ပွုမှုနထေိုငျရေးဟာ အရေးကွီးကွောငျး ကနျြးမာရေးတာဝနျခံတှကေ သတိပေးခကျြတှေ ထုတျပွနျနတောပါ။
ကူးစကျနှုနျး သနှေုနျး သိသိသာသာ မြားစတေဲ့ Mutation ချေါ မြိုးဗီဇပွောငျးလဲမှု ဆိုတာဘာပါလဲ။
မခငျဇာဝငျးပွညျ့။. ။“မြိုးဗီဇပွောငျးလဲတယျ ဆိုတာက မြိုးဗီဇရဲ့ sequence အစီအစဉျထဲက code လုပျတာ ပေါ့နျော။ ဒီမြိုးဗီဇ အစီစဉျထဲမှာ သူက ABCD ဓါတျသတ်တုပစ်စညျး လေးတှကေို code လုပျတဲ့ အခါမှာ သူက တခုလေး ပွောငျးသှားတာနဲ့ code လုပျတယျ ဆိုတာက A B C D အတှဲတခုသညျ - ဒီ ၃ ခုတှဲအတှဲတခုသညျ အမိုငျနိုအကျဆဈ တခု ကို သူက ကိုယျစားပွုတယျ။ အဲဒီလို ကိုယျစားပွုတဲ့ အခါမှာ A B C D အတှဲတခုက အစီအစဉျ ပွောငျးသှားတယျ ဆိုတာနဲ့ သူ့မှာ ထှကျတဲ့ ပရိုတိနျးရဲ့ ပုံစံကလညျး ပွောငျးသှားတယျ။ ဒါကို အဓိက အားဖွငျ့တော့ မြိုးဗီဇ ပွောငျးလဲမှု mutation ဆိုပွီးတော့ ချေါတာ ပေါ့နျော။
ပရိုတိနျးက သူက ပုလဲ ဆှဲကွိုးအနနေဲ့ ကွညျ့မယျဆိုရငျ ပုလဲကလေးတှေ အကုနျလုံး စီထားတဲ့. ပုလဲဆှဲကွိုးသညျ ပရိုတိနျး ဆိုရငျ ပုလဲ တခုသညျ အမိုငျနိုအကျဆဈ တလုံး။ အမိုငျနိုအကျဆဈ တလုံး တလုံး စီမှာ အဖွူကလေးတှပေဲ လာပွီး အဲဒီ တလုံးမှာ မဲသှားတယျ ဆိုရငျ ဒီဟာသညျ mutation ဖွဈတာ။ mutation ဖွဈနတေဲ့ ဟာသညျ သူ့ရဲ့ ဒီ ပုလဲ ဆှဲကွိုးက အလုံးက ပုံစံ မတူတော့ဘူး ဖွဈသှားတယျ။ ပုံစံမတူတော့ပဲ ဖွဈသှားတဲ့ အခြိနျက ပုလဲ ဆှဲကွိုးကို ခှလေိုကျတဲ့ အခြိနျမှာ - ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ပရိုတိနျးတှေ အကုနျလုံးက ကိုယျထဲမှာ နတေယျ ဆိုလို့ရှိရငျ အတနျးလိုကျကွီး နတော မဟုတျဖူး။ 3D - သုံးဖကျမွငျ ရုပျလုံးကွှ ပုံစံမြိုး ပေါ့နျော။ သူတို့ ရဲ့ ပုံစံလေးတှရှေိတယျ။ အဲဒီ. ပုံစံက ပွောငျးသှားတယျ။ ပွောငျးသှားတဲ့ အခါ ကရြငျ သူတို့ရဲ့ receptor ကို bind လုပျမယျ့ - receptor ဆိုတာက ကိုယျထဲမှာ ၊ လကျခံကောငျရဲ့ ဒီ receptor ကို ကုပျနိုငျအားသညျ ဘယျလောကျ attraction ရှိသလဲ ဘယျလောကျ ကုပျထားနိုငျသလဲ၊ ဘယျလောကျ မွဲ သလဲ ဆိုတဲ့ အဆ ကှာသှားတယျ။ အဲဒီ အတှကျကွောငျ့ - mutation ကွောငျ့ ပြံ့နြှံ့အား ပိုကောငျးလာနိုငျပွီး ကူးစကျမှုသိသိသာသာ မြားသှားတာပါ။”
မြိုးဗီဇပွောငျးလဲတဲ့ ပုံစံကို လလေ့ာပွီး ကာကှယျဆေးတှေ ကုသဆေးတှေ ထုတျနိုငျဖို့ ကွိုးစားနတောပါ။
မခငျဇာဝငျးပွညျ့။. ။“အခုခြိနျအထိကတော့ စပွီးတော့ တှတေဲ့ ကိုဗဈ ၁၉ ဗိုငျးရပျဈ ပိုးသညျ သူနဲ့ မြိုးဗီဇ တူတဲ့ ၉ ၆.၄ % တူတယျ ဆိုတဲ့ဟာက ဒီ မွငျးခှါပုံသဏ်ဍာနျ ရှိတဲ့ ဒီ horse shoe ဆိုတာ။ ဒီ မွငျးခှါပုံသဏ်ဍာနျ ရှိတဲ့ လငျးနို့ ပေါ့နျော။ အဲဒီမှာ တှရေ့တဲ့ ဟာသညျ ၉ ၆.၄% မြိုးဗီဇ တူတယျ။ ကနျြတဲ့ အဲဒီ ၃.၆% လောကျကလေးကပဲ နဲနဲ ကှဲသှားတယျ။ ကှဲသှားတဲ့ဟာမှာ အဓိက တှရေ့တဲ့ ဟာက ဒီ ပေါငျးတဲ့ spike ပရိုတိနျး- ကွကျမောကျသီးပုံ သူ့ရဲ့ ထိပျက အမှေးလေးတှမှော ရှိတဲ့ဟာပေါ့။ ဗိုငျးရပျဈကို ကွကျမောကျသီးပုံ လို တှကျမယျ ဆိုရငျ သူ့ရဲ့ ထိပျက အမှေးလေးတှကေ ဒီ receptor ကို လာပွီး ထိမယျ။ ဒီလိုထိတဲ့အခါ ပွနျခှါလို့ မရတဲ့ ပေါငျးစပျခွငျးနဲ့ ပေါငျးပွီးတော့ ဘယျလို ဝငျတယျ ဆိုတာ။ အဲဒီဟာမှာ အဓိက ကှဲသှားတာ ပေါ့နျော။
စ စ ခငျြးတုနျးကတော့ ဒီကွားခံကောငျက သငျးခှခေပျြလို ပုံစံမြိုး သတ်တဝါမြိုးကနေ ကူးတယျ၊ ဆိုပွီးတော့ သိရတယျ။ ရှဆေ့ကျပွီး တော့ နောကျထပျပွီးတော့ သကျသေ အထောကျအထား ထပျမတှရေ့တဲ့ အတှကျ ကွားခံက ဘာကောငျလဲ ဆိုတာကို တော့ အခုထိ ရှာနတေုနျးပဲပေါ့။ တိတိကကြ တော့ မသိရသေးဘူးပေါ့။
စစခငျြးးတှတေဲ့ ထဲက မြိုးဗီဇ sequence အရ ဘယျလောကျ တူတယျ ဆိုပွီးတှကျတယျ။ မြိုးဗီဇက ဒီကနေ တဆငျ့ ပွောငျးသှားတယျ။ ဒီဥရောပက တှတေဲ့ လူနာတှဆေီက ရတဲ့ မြိုးဗီဇနဲ့ တရုတျပွညျမက ရတဲ့ မြိုးဗီဇ တခါ ပွနျယှဉျပွီးတော့ ကွညျ့တဲ့ အခါ ကတြော့ ဒီ spike ပရိုတိနျး က ပွောငျးလဲမှု ကလေးတှေ ရှိတယျ။ တခုပဲ။ အဲဒီ ပွောငျးလဲမှု တခုက သူ့ရဲ့ (ပူးပေါငျးနိုငျ) ပြံ့နိုငျစှမျး အားကို သူက ပိုပွီးတော့ တိုးပှါးစတေယျ ဆိုပွီးတော့ သူတို့က ခနျ့မှနျးတယျပေါ့။
ဒါကွောငျ့မို့ ဥရောပမှာ ပြံ့သှားတဲ့ နှုနျးက တရုတျပွညျမှာ ပြံ့တဲ့ နှုနျးထကျ ပိုပွီးတော့ အဆမတနျ မြားသှားတယျပေါ့။ ဒါကွောငျ့ ဒီ ထပျပွီးတော့ ပွောငျးလဲအုံးမလား ဆိုတဲ့ဟာကိုတော့ လလေ့ာနတေုနျးပဲ။ သိပ်ပံပညာရှငျတှေ လညျးပဲ ယူနရေငျးနဲ့ပဲ လလေ့ာနတေုနျးပဲ ပေ့ါနျော။ တခြိနျထဲမှာ လညျးပဲ သူတို့က တှတေဲ့ spike ပရိုတိနျး ကို ပဈမှတျထား target လုပျ တာသညျအထိရောကျဆုံး ဖွဈတဲ့ အတှကျကွောငျ့ မို့လို့ တျောတျောမြားမြား ကာကှယျဆေးတှေ ကလညျး ဒါကိုပဲ ဦးတညျပွီး လုပျနကွေတယျပေါ့။”
မခငျဇာဝငျးပွညျ့ရဲ့ ပွောကွားခကျြနဲ့ပဲ ဒီသီတငျးပတျအတှကျ သိပ်ပံနဲ့နညျးပညာ ကဏ်ဍကို ဒီမှာပဲ ရပျနားလိုကျပါရစေ။